Maurizio Sarri oo war aad u wanaagsan u sheegay jamaahiirta kooxda Chlsea kahor kulanka Newcastle United – Gool FM
(Chelsea) 24 Agoosto 2018. Tababaraha kooxda Chelsea Maurizio Sarri ayaa meesha ka saaray inuu qarka u saaran yahay da’ayrka reer England Ruben Loftus-Cheek inuu ka dhaqaaqo safka Blues inta lagu jiro suuqan xagaaga.
Maurizio Sarri ayaa wuxuu hadalkiisan imaanayaa kadib markii uu kasoo muuqday maanta shir jaraa’id kahor kulankooda saddexaad Premier League ay kula ciyaari doonaan Axada kooxda Newcastle United.
“Waxaan la sheekeestay isaga laba jeer isbuucan, sidaas darteed waxaan u maleenayaa in Loftus-Cheek uu nagula sugnaan doono Blues”.
“Waxaa suuragal ah inaan mar labaad ka hadalno xaaladdiisa, laakiin kaliya waa bisha December”.
Sidoo kale macalinka reer Talyaani ayaa wuxxuu jamaahiirta kooxda Chelsea u sheegay warkii ugu fiicnaa, kadib markii ka dhawaajiyay in Eden Hazard uu ku soo bilaaban doono kulanka Newcastle United markii ugu horeesay xili ciyaareedkan.
“Waxaan u maleenayaa in Hazard uu diyaar u yahay inuu ciyaaro 50 ama 60 daqiiqo, ma aqaano inuu ciyaari karo ilaa iyo 90 daqiiqo, balse wuxuu ku soo bilaaban doonaa kulanka Newcastle United”.
DEG DEG: Kabtanka Tottenham oo XABSI la dhigay ka hor kulanka Man United...(Muxuu sameeyay??)